कल-टु-एक्शन टेस्टिंग हबस्पटको साथ परिणामहरू Martech Zone
यससँग कल-टु-एक्शन टेस्टिंग परिणामहरू Hubspot
मङ्गलबार, जनवरी 15, 2013 मङ्गलबार, जनवरी 15, 2013 Douglas Karr
यो देख्न सँधै आश्चर्यजनक हुन्छ कि कार्यमा कलमा सूक्ष्म भिन्नताहरू क्लिक-थ्रू दरहरू र रूपान्तरणहरूमा कसरी ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। को क्षेत्रहरु मध्ये एक Hubspot कि मलाई लाग्दैन कि धेरै व्यक्ति पूर्ण रूपमा लाभ उठाउँछन् उनीहरूको कल-टु-एक्शन सेक्सन।
तपाईले एकल कल मार्टेकलाई तलको फुटरमा बायाँ स्तम्भमा देख्नुहुनेछ। हामीले समान कल-टु-एक्शनको तीन संस्करणहरू परीक्षण गर्यौं। सन्देश पठाउँदा उस्तै उस्तै थियो, तर हामीले रंगलाई बिभिन्न बनायौं। एउटा कालो पृष्ठभूमि हो जुन पृष्ठको अत्यधिक विपरित थियो र अन्य लगभग समान थिए - बटनको रंगमा मात्र भिन्नता थियो।
परिणामहरू चाखलाग्दो छन् - हरियो बटनको साथ CTA ले अन्य CTA हरूलाई लगभग दोब्बरमा पार्दछ! हरियो बटन संस्करणको परिणामले कम क्लिकहरू भयो, तर धेरै उच्च रूपान्तरण दर।
यो एउटा सानो परिक्षण हो जहाँ हामीले रंगहरू मात्र भिन्न पार्यौं ... हामी जारी राख्नेछौं CTA लाई अनुकूलन गर्नुहोस् अधिक र colors्गमा र बिभिन्न संस्करणहरूमा परीक्षण परिणामलाई अनुकूलन गर्नका लागि। हामी पनि तथ्यलाई मान्यता दिन्छौं कि समग्र क्लिक दर एकदम कम छ, पनि ... हामीले यस सीटीए प्रस्तुत गर्दा हामीले केहि कार्यहरू पाएका छौं। यो कठिन स्थानमा हो र यसको वरिपरि सामग्रीसँग सँधै सान्दर्भिक हुँदैन।
Hubspot परीक्षण गर्न यो सरल बनाउँछ। तपाईं आफ्नो कल-टु-एक्शनको धेरै संस्करणहरू तिनीहरूको इन्टरफेसमा थप्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि तपाईंको साइटमा प्रदान गरिएको स्क्रिप्टलाई मात्र इम्बेड गर्नुहोस्। Hubspot कल-टु-एक्शनको साथ विशिष्ट आगन्तुकहरूलाई लक्षित गर्ने तरिकाहरू पनि प्रदान गर्दछ ... तर त्यो अर्को पोष्टको लागि हो!
नोट: DK New Media प्रमाणित हो Hubspot एजेन्सी।
टैग: ab testकार्यलाई कल गर्नुहोस्कार्य परीक्षण कलहबस्पटपरीक्षण
जनवरी 15, 2013 मा 10: 51 एएम
मलाई थाहा थिएन तपाईं हबस्पट एजेन्सी डग हुनुहुन्छ! हामी अहिलेको लागि हबस्पट प्रयोग गर्दछौं http://www.tynerpondfarm.com तर स्विच गर्ने सोचमा थिए। के हामी यसको बारेमा छिट्टै कुरा गर्न सक्छौं? हामी हामीले चाहेको नतिजा पाइरहेका छैनौं तर यो हाम्रो गल्ती हुन सक्छ ...
जनवरी १, २०१ 15 १२::2013 अपराह्न
हो, निश्चित छन्। हामीले हबस्पट, परडोट, एक्टन, मार्केटो र एलोक्वालाई हाम्रा ग्राहकहरूसँग @chrisbaggott: disqus :) लागू गरेका छौं। अवश्य पनि, इन्डियाना कम्पनीहरूलाई यो थाँहा छैन किनकि उनीहरूले अन्य राज्यहरूबाट एजेन्सीहरू भाडामा लिन्छन्।